२८ बैशाख २०७८, मंगलबार १२:५४
काठमाडौं । मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बन्दै गएको छ । कोरोना संक्रमण र मृत्युदर पनि दिनदिनै नयाँ उचाइमा पुगिरहेको छ । कोरोना संक्रमित बिरामीले स्वास्थ्य उपचार समेत पाउन सकेका छैनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार सत्ता जोगाउने दाउमा केन्द्रित छ ।
यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेसको कोभिड–१९ अनुगमन समितिका सदस्य एनपी साउदसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका साउदसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुपले बढिरहेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रणको लागि कसले के गर्नुपर्ला ?
पहिलो लहरमा कोरोना सुरु हुँदा संसारलाई नै यो महामारीबारे जानकारी थिएन । त्यसकारण अस्पताल, जनचेतना कार्यक्रम, लकडाउनबारे अभ्यास कसैलाई थाहा थिएन । संसारले गरेका सबै नयाँ प्रयत्न थिए । दोस्रो लहर सुरु हुँदासम्म मानिसलाई धेरै जानकारी मिलिसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष गरेर अस्पताल सम्बन्धी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि कुनै काम गरेको देखिएन ।
औषधिको जोहो गर्ने, अक्सिजनको जोहो गर्ने, अक्सिजन प्लान्टहरु निर्माण गर्न लगाउने र यसका बारेमा चाँहि जनचेतना अभियान र भारतबाट या तेस्रो मुलुकबाट आउने मान्छेहरूको पनि उपयुक्त किसिमको व्यवस्थापन गरेर यो कोरोनाको चेनलाई तोड्ने बारेमा सरकारले गर्नुपर्ने काम बिलकुल नगरेको देखियो ।
जहिले पनि कोरोना माहामारीको बेला स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भ्रष्टचार भइरहेको कुरा बाहिर आएकै छ । यो भष्टाचार भइरहेको र कमिसन खोरका कारणले जनताको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा परेको कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रकै नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुबाट सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि हामी अहिले कुन स्थानमा छौं भन्ने कुरा उदांगिएको छ ।
पहिलो चरणको कोरोना महामारीबाट नै क्षति भएको थियो । तर, त्यो महामारीका कारणले भएको क्षतिको न्यूनीकरणको सम्बन्धमा राज्यले उपयुक्त किसिमको भूमिका खेल्न नसकेको कारणले थप गम्भीर क्षति हुँदै गएको छ ।
काठमाडौंभित्र र सातवटै प्रदेशमा सेनालाई लगाएर भए पनि हामीले अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न सक्थ्यौँ । त्यो पनि भएन । त्यति मात्रै होइन स्वास्थ्य सामग्रीहरु, भेन्टिलेटरहरु, किट्सहरू, हामी प्रयाप्त जोहो गर्न सक्थ्यौँ । अहिले पनि जुन चालीसदेखि पचास प्रतिशतसम्म जाँच गरिएका मान्छेमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ यहि अनुपातमा देशभरीको आँकडा मुल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि यो दिनको करिब पचास/साठी हजारको दरले अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ । यसमा हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ ।
हामीले कुन कुरामा तालमेल मिलाउन सकेनौँ ? सरकार उदासीन नै भएको हो कि अहिलेको कोरोना रोकथामको लागि एक ढंगले क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ ?
अब पोहोर साल नै कोरोनाले प्रयाप्त मात्रामा मानवीय क्षति गरिसके पछि हामीले प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु तयार गर्ने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थियौँ । प्रतिपक्षको हैसियतले राष्ट्रिय बजेट विनियोजन गर्दा पनि रचनात्मक भूमिका खेल्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । सरकारलाई सहयोग रहँदै आएको थियोे र छ ।
यो बीचमा कोभिडलाई लक्षित गरेर सातैवटा प्रदेशमा थप स्वास्थ्य संरचनामा बनाउनतिर सरकार विल्कुलै लागेन । त्यति मात्रै होइन भेन्टिलेटर खरिद गर्ने, आइसियु थप गर्ने, उपयुक्त समयमा नै कोरोनाको खोप अधिकतम मान्छेलाई लगाउन रणनीति बनाउने, सरकारबाट सरकारले नै किन्नुपर्ने पद्धतिबाट अधिकतम मालसामान या भ्याक्सिन ल्याउने काममा सरकार चुकेको छ ।
अब अहिले तपाईं आफै पनि कोरोना रोकथामको लागि जनता सँगै हुनुहुन्छ । समस्या कस्तो आइरहेको छ ? त्यसबाट बच्ने उपाय तथा सहजीकरण कसरी गरिराख्नुभएको छ ?
अहिले एकैचोटी पहिलाको जस्तो खान पाएनौं, बस्न पाएनौं भन्ने अलि कम छ । खाद्यान्न आदि–इत्यादि माग गर्ने कुरा कम छ । अहिले ज्यादा जसो समस्या चाँहि अस्पतालमा भर्ना गरिदिनु पर्यो, आइसीयु बेडको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमका समस्या बढी आइरहेका छन् ।
केहिदिन यता सुदूरपश्चिम लगायत अन्य ठाउँबाट पनि अक्सिजनको अभाव भयो, अक्सिजन कहाँबाट हुन्छ तपाईले भन्दिनुपर्‍यो, कुन कारखाना हो, कुन ठाउँबाट कुन अस्पतालमा त्यसको स्टोर छ भनेर सोध्नुहुन्छ । अहिले चाहि मान्छेहरु आइसीयु, भेन्टीलेटर अक्सिजन पाउने कुरामा गम्भीर दबावमा छन् । यसका लागि म र हाम्रो पार्टी सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन लागि परेका छौं । हामी दिनहु सहजीकरण मै छाै ।
यो समस्यालाई कसरी समाधान गरिरहनु भएको छ । यो हाम्रो बसमा छ कि छैन ?
अब अहिले बढो गाह्रो अवस्थामा छु । सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन अहिले देशभरी अहिले अक्सिजनको सप्लाई हुन सकेको छैन । नेपालगञ्जमा कारखाना बिग्रियो भन्ने कुरा आएको छ ।
कैलालीमा पनि कारखाना बिग्रियो भन्ने कुरा आएको छ । कतिपय ठाउँमा बिरामी नै हामीसँग सम्पर्क गरेर अक्सिजन सुनिदिनुहोला भनेर दबाव दिइरहनुभएको छ । यो अहिले कसैको बसमा छैन । यो संकटबाट पार पाउन सामुहिक प्रयत्‍नको खाँचो छ ।
अब यसमा स्वास्थ्य सामाग्रीको प्रवन्ध मिलाउने एक ढंगले सरकारले नै हो । तपाईं आफै पनि सुदूरपश्चिमको जिम्मेबार नेता हो । त्यसका लागि सरकार पक्ष सँग के कस्तो ढंगले पहल गरिरहनु भएको छ ? के कसरी दबाब र सुझाव दिइरहनु भएको छ ?
हामीले लगातार के भनिरहेका छौं भने– सरकारले त्यहाँका सार्वजनिक ठाउँ मन्चहरु, त्यहाँका टुँडिखेल, विद्यालयलाई, शिक्षण संस्थालाई प्रयोग गरेर तत्कालका लागि सेनाहरूलाई परिचालन गरेर भएपनि केही बेडहरु र अक्सिजनको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्यो ।
अहिले अस्पताल जानपनि मान्छेलाई ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने किंवदन्ती जस्तै अवस्था छ । कैयाै मान्छे मरिसके । विरामी सँगको मान्छे मरिसक्यो आफूपनि मर्छु जस्तै लागेर भोलि पर्सी देखि मेरो अनुहार देख्न पाउनुहुने छैन । मलाई घर फर्काएर लौजाओ भनेर रोइ कराई गरिरहेका सन्देश घर परिवार कहाँ पठाइरहेको अवस्था छ ।
त्यस कारणले कतिले अस्पताल नै जान पाएका छैनन् । कतिले अस्पताल पुगे पनि उनीहरुको उपयुक्त किसिमको उपचारै हुन सकेको छैन । आइसीयुको बेड पाएको छैन । भेन्टिलेटर त धेरै टाढाको सपनाको कुरा भयो । त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा सरकारले इमर्जेन्सी लेबलमै यी कुराहरूको जोहो गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा या नेपालगञ्जमा मात्रै अस्पतालको व्यवस्था गरेर हुँदैन । कमसेकम ७ वटै प्रदेशका सातै ठाउँमा सेना नै लगाएर भएपनि अस्थायी किसिमको अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, अक्सिजन प्लान्ट खोलेर थप अक्सिजन पुर्याउने, अक्सिजन उत्पादन गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्दछ ।
अब सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा चार जना मन्त्री नै हुनुहुन्छ । त्यहि त्यो खालको भयावह अवस्था बन्दै गइरहेको छ । त्यसका लागि ती मन्त्रीहरु सँग के कस्तो समन्वय र संबाद गरिरहनुभएको छ ?
अब सुदूरपश्चिमबाट चाहि ४ जना मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई अब सामाजिक उत्तरदायित्व भएपनि, सरकारको उत्तरदायित्व भएपनि उहाँहरुले त्यो भूमिका खासै निर्वाह गरिराख्नुभएको छैन ।
उहाँहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि जुन रुपमा घच्घच्याउनु पर्ने हो त्यो रुपमा सकिराख्नु भएको छैन । हामीले प्रयाप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री त्यहाँ उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने, बेडहरुको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, अत्यावश्यकीय जो बाहिरबाट पनि इमर्जेन्सीमा आउँदैछ । अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर भेन्टिलेटरदेखि लिएर अन्य स्वास्थ्य सामग्री आउँदैछ । त्यसलाई मुलूक भरी एउटा समानुपातिक रुपमा त्यसलाई सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी वितरण गर्नुपर्ने हामीले नियमित कुरा गरिराखेका छौँ । तर, अहिले पनि त्यसको परिणाम देख्न सकिएको छैन ।
त्यसो भए तपाईं स्वास्थ्य सामग्रीको सहज प्रबन्धका लागि निरन्तर संबाद र छलफल गरिराख्नु भएको छ होइन ?
एकदमै जीवन मरणको अवस्थामा पुगेकाहरुको जनस्वास्थ्य जुन छ, त्यसलाई संवेदनशील भएर सरकारमा बसेकाहरुले हेर्नुपर्छ । र तपाईंहरुले व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर लगातार सरकारलाई दबाब पनि दिइरहेका छौँ । हामी आफै पनि लागि रहेका छौं ।
त्यहाँका जनताले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव त भोगिरहेका नै छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यहाँका जनतालाई के भनि ढाडस दिइरहनुभएको छ ?
अब त्यहाँ कस्तो दयनीय परिस्थित छ भने, हिजो विहान मात्रै आएको खबर चाहि मुत्यु भएका दुईजना दाजुभाइ एउटै परिवारका थिए । रेमडिसिभिर औषधि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको अवस्था छैन । सबैको आर्थिक पहुँचभित्र पनि त्यो छ जस्तो लागेको छैन ।
अब अन्य कुराको हकमा पनि अक्सिजनकै लागि समस्या भयो हामी त्यहाँ अस्पतालमा भर्ना हुन पनि संक्रमित भएर झन बढी संक्रमित भएर मर्ने हुँ कि भन्ने किसिमको सन्त्रास त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा देखिएको परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थमा सबै पनि धेरै संयम राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरु सँग पनि सरसल्लाह गरिराख्नु भएको छ । कतिपय ठाउँमा हामीलाई सम्पर्क गर्दा हामीले गाह्रो अप्ठ्यारो परेकालाई सहजीकरण गरिरहेका छौ ।
अस्पतालमा सबैको सामाजिक रुपमा पहुँच हुने भएकाेले त्यो ठाउँमा पनि पुगेर अस्पतालप्रति सकारात्मक सोच विकास गरेर स्वास्थ्य लाभ लिनुपर्छ । र, कोरोनाको औषधि नबनी सकेको भएपनि केहि आधारभूत औषधिहरू सरकारले दिने गरेको छ । चिकित्सकहरुले दिने गर्नुभएको छ । त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।
अन्त्यमा यही विषयमा केहि भन्नुहुन्छ ?
सबै दाजुभाइ दिदिबहीनीहरुको म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । यो विपदको घडीमा धैर्य धारण गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदिबहिनी र हाम्रो पार्टीका साथीहरु पनि खटिराख्नु भएको छ । र, थप मेहनत गरेर यो त्रासबाट हाम्रो समाजलाई मुक्त गर्नका लागि थप प्रयत्न गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू
नेपाल–भारत वार्ता जलविद्युत्, विकास केन्द्रित
इलामको माङसेबुङमा एमालेका हेमन्त राई निर्वाचित